Akpụkpọ mmiri snow | Họrọ nke kachasị mma n’ime sọọsọ atọ - ULLER
Ugbu a oge ịgba ọsọ na-abịa, oge eruola ka ị chee banyere nke ga-akacha mma golfles na anyị nwere ike ịbanye n'ahịa.
Anyị hụrụ snow n'anya! Onweghi ihe dịka ị na-agbada egwu na bọọdụ gị, na-ahapụ usoro gị kachasị mma na njikwa gị na snow. Ọ bụrụ na ị maghị, ha na-ekwu na tebụl mbụ nke snowboard Emere ya na 1965 site n'aka Sherman Poppen, onye injinia si Muskegon, Michigan (USA) onye otu ụbọchị kpebiri ijikọ skis abụọ ma nye ha ụmụ ya nwanyị ka ha kpọọ na snow. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, ọ malitere na ewu ewu n'ime ọtụtụ afọ dị ka egwuregwu dị oke egwu, na-ewu ewu n'etiti ndị egwuregwu. Agbanyeghị, ọ bụ rue n'afọ 2015 ka etinyere ya n'egwuregwu Olimpik ma nata mba ụwa taa nwere taa.
Taa, ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-eme snowboard ndị ọkachamara na ọtụtụ nde ndị ọzọ raara onwe ha nye maka ileta tụrụ ezigbo maka asọmpi mba na mba ma ọ bụ naanị ịbanye na nkuzi na usoro mbụ na snowboard.
Mana enwere otu ihe ndi nwere obi ike ndi a (ndi okacha amara ma obu ndi mbu) nwere na ha: ha na e buru ukwa ha, akụrụngwa ha golfles. Ọ dị ezigbo mkpa ka ha jiri bọọdụ dabara adaba na akpụkpọ ụkwụ dabara adaba, uwe na-ekpo ọkụ, uwe aka, ihe nkpuchi ma ọ bụ ugogbe anya-igwe nchebe na otutu obi ike iji banye n'ime ihe.
Ọ nwere ike ịda ụda gbagwojuru anya, mana ọ dị nfe! Mgbe anyị họrọ nke anyị golfles Enwere oge atọ dị mkpa ga-enyere gị aka ịhọrọ nke kachasị mma, anyị na-akọwa ha ebe a.
Isi ihe na-ahọrọ kacha mma SNOWBOARD iko
1. ANY PR AH SUNA
Nke a abụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla: nchedo anya dị ezigbo mkpa mgbe ọ bịara golfles. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kacha mkpa mere ị ga-eji na-eyi gị mgbe niile snow ugogbe anya. Na, na mgbakwunye, ọ bụ otu n'ime nkọwa kachasị mkpa ị kwesịrị ile anya mgbe ịzụrụ ha, ya bụ, ọ bụrụ na ọ nwere nchebe 99% ma ọ bụ 100% nke anyanwụ iji chebe gị n'ezie.
Na-achọpụta mgbe niile na ha nwere nchekwa UV- 400! Nke a pụtara na gị golfles Ha ga - egbochi ụzarị ọkụ ultraviolet ọ bụla na - erughị nanomita 400, na nzacha ha ga - echebe gị pụọ na ụzarị UVA na UVB.
Na mgbakwunye, ngafe nke nchapụta na mpaghara snow dị oke mma, ọkachasị n'oge oge oyi n'ihi na ọnọdụ anwụ dị na mbara igwe dị ala. A na-eji ụzarị ọkụ eme ihe maka ọdịdị na-emerụ anya n'okpuru ọnọdụ ndị a na-ewekwa iwe ma ọ bụrụ na anyị eyighị mkpuchi anyị ma ọ bụ golfles zuru ezu.
N'otu aka ahụ, ọ dị mkpa ịtụle na snow n'okpuru ọnọdụ ndị a ga-egosipụta ìhè na -ekwu okwu sayensị. Nke a bụ n'ihi na acha ọcha na-adịghị achacha ọkụ, mana na-ajụ ya. N'ụzọ dị otú a, ịdị na-ekpo ọkụ na snow pụtara na ị na-ahụta nghọta sitere n'ọtụtụ akụkụ na n'ihu, yabụ na anyị ga-echedo onwe anyị karịa ka anyị nwere ugogbe anya-igwe ma ọ bụ ihe mkpuchi skị dị mma.
Ọ dịkwa mkpa ịtụle na gị golfles ha na-agbaso usoro ISO iji kpuchido gị nke ọma ma CE kwadoro ya na ị na-agbaso ụkpụrụ nchekwa Europe.
2. AKWENKWỌ NDEN AHEN
na ugogbe anya-igwe Ọ bụghị naanị na ha ga-echebe anya gị pụọ na radieshon nke anyanwụ, ha ga-enyere gị aka ịrụ ọrụ gị mgbe ị na-adọnye site na snow, ebe ha ga-eme ka ọhụhụ gị dịkwuo mma. Ọ ga-adị ezigbo mkpa ịhọrọ oke ụzọ kacha mma ugogbe anya mmiri,nke bara uru bara uru maka ego, na-ege ntị mgbe niile na lenses ọ na-eyi, site na imewe na agba, na ụdị.
- D C KA agba -
Igwe eji eme ihe enwere ọtụtụ, mana ole na ole egosiri iji nyere gị aka inwe ọganihu na egwuregwu ahụ. N'ezie ị ga-ahụ ọtụtụ agba nhọrọ ma ị ga-eche ndị m ga-ahọrọ? Hà ga-adị iche? Eziokwu bụ na ha dị iche na ha nwere njirimara akọwapụtara nke mere na ị nwere ọhụhụ ka mma mgbe ị na-egwu. Mụta ntakịrị ihe banyere agba ndị kachasị mma golfles!
Golfles edo edo na-acha odo odo
A na-atụ aro ha mgbe nchapụta ọkụ dị ala; ma ọ bụrụ na ị snowboard n'oge mgbede ma ọ bụ ụtụtụ, ma ọ bụrụ na enwere ikuku na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ụbọchị igwe ojii ma ọ bụ obere igwe ojii.
Ọ bụ agba na-esote edo edo, ya mere a na-egosikwa ya maka ụbọchị igwe ojii na obere ọkụ. Agbanyeghị, ụcha lens a na - enyere aka ịme ka ọdịiche dị iche na agba nke anya gị na - ahụ.
Golfles uhie na-acha uhie uhie
na ugogbe anya-igwe Red agba budata belata ike ọgwụgwụ nke anya ma nye gị ezigbo omimi nke ubi, yana ịbawanye iche na agba. A na-atụ aro ụcha elele anya nke ị họọrọ maka enyo egwuregwu na masks na gburugburu snow, yana maka egwuregwu na-apụ n'okporo ụzọ.
Anụ golfles na-acha anụnụ anụnụ
na ugogbe anya-igwe Na anya m na-acha anụnụ anụnụ, a na-akwado ha maka ụbọchị anwụ na-acha, mana ị nwekwara ike iji ya na ụbọchị igwe ojii. Na golfles na-acha anụnụ anụnụ anya m na-enye a “jụụ” echiche nke panorama, na nke a na ha aka igbochi ngafe ọkụ ma ọ bụ odo ìhè anyanwụ, na belata anya ike ọgwụgwụ nke na-eme dị ka a N'ihi.
Golfles ọcha na-acha odo odo (odo odo ma ọ bụ odo odo)
na ugogbe anya-igwe na-acha odo odo anya m ha mezuo ebumnobi nke attenuating ngafe nke ìhè na-abịa site echiche nke ìhè na gburugburu ebe obibi, -enyere gị aka ịghọta nke ọma contours nke ihe na ndị gbara gị gburugburu. Yingzụ ihe ugogbe anya-igwena-acha odo odo anya m na-emekwa ka ọhụụ omimi gị dị omimi, yana nghọta gị banyere ezigbo agba nke okike.
Grey snowboard na-acha odo odo
Grey lenses na-ebelata oke ọkụ enwere ike, yabụ a na-atụ aro ha maka ụbọchị anwụ na-acha na awa kacha elu n'oge ụbọchị. Na mgbakwunye, ha na-enyere gị aka ịmatakwu ezi agba dị na gburugburu gị.
Green glaasi golfles
A na-atụ aro ya karịsịa mgbe ị na-eme egwuregwu egwuregwu oge oyi nke gụnyere ọtụtụ ọsọ na agagharị na njikwa ha. Ha na - enyere anya aka ilekwasị anya n’ihe ndị gbara ya gburugburu ma nyere ya aka ịmata ọdịiche dị n’etiti akụkụ ha na ọdịiche ha. Ihe nlereanya a nke ugogbe anya-igwe na-ebelata ọhụụ na ụbọchị igwe ojii, ma na-enyere aka idozi ìhè na ụbọchị anwụ na-acha.
-DABERE NA CRYSTALS CATEGORY-
Nke kacha mma golfles Ha ga-echebe gị ma anwụ na-acha na ụbọchị igwe ojii, mana ọ bụ naanị ma i jiri ụdị anya anya ziri ezi. Youmaworị ha? Igwe ugodi na nma nwere akara ngosi, site na CAT0 ruo CAT4, ma oburu na ha nchacha ma obu kwe ka uzo nke ìhè nke gabigara na ya rue ma obu ihe kariri. N'okwu a, ụdị 0 ga-abụ nke kachasị, na 4 ga-abụ ọchịchịrị.
O doro anya. Ha nwere ike enweghị agba ma ọ bụ nwee ezigbo ọkụ ma dịkwa mma. Ya ìhè nnyefe nzacha si 80% na 100%.
Ìhè na agba ma dị mma iji rụọ ọrụ mgbe ọkụ dị ala, mgbe anwụ na-ada na mgbede, n'ụtụtụ, na ụbọchị igwe ojii. Mgbasa ọkụ ya na-enyocha site na 43% ruo 80%.
Ha bụ kristal gbara ọchịchịrị. Mgbasa ọkụ ya na-enyocha 18% na 43%, gosipụtara maka ikpe dị n'etiti ọkara.
Ọ nwere agba gbara ọchịchịrị iji nwee ntụsara ahụ na anyanwụ, yana n'oge kacha elu. Ya ìhè nnyefe nzacha si 8% na 18%. Ha na-enye gị ọkwa kachasị nke ọchịchịrị maka egwuregwu n'èzí, mgbe ọkụ ọkụ na-ajụ oke.
Otu kristal a gbara ọchịchịrị n'ezie. N’ezie, anaghị ekwe ka eji ha maka ịnya ụgbọala. A na-eji ha mee ihe n'ọnọdụ dị mma ebe oghere nke 3 na-ezughị. Mgbasa ọkụ ya na-enyocha site na 3% ruo 8%, ebe kacha bụrụ ọchịchịrị n'etiti ụdị niile.
Udi 1 na Udi nke ato bu nke kachasi nma iji eme mgbe ị na eme nkuzi snow na dabere onodu ubochi nke inwa na gi.
Ọ B IFR IF Ọ B IFR THEY NA HA B ARE ND G KWESBOR SN ND WITH NA-ECHICHE MAGNETIC!
Kasị atụ aro ka ịhọrọ golflesna oghere ndọta na-agbanwe agbanwe ga-enyere gị aka ịhọrọ otu oghere nke dabara gị kacha mma. Ọnọdụ ihu igwe nwere ike ịgbanwe site n'otu oge gaa na nke ọzọ, ọ bụrụkwa nke gị golfles O nwere uru a, maka na ị gbanwee ya na sekọnd ole na ole ma jiri nke ziri ezi.
Egwuregwu snow dị ka ịgba ọsọ ma ọ bụ snowboard ha bụ egwuregwu gabigara oke na egwuregwu nke ekwesiri iji kpọrọ ihe. Nke a chọrọ akụrụngwa ziri ezi, yana nkwadebe anụ ahụ na nke uche iji kwado oge kachasị mma nke egwuregwu na adrenaline.
3. Akụrụngwa NA Fitness
Na-echeta mgbe nile na ihe ị họọrọ maka nke gị golfles na ọdịdị dị mma na ihu gị ga-ekwe gị nkwa na ha mezuru ọrụ nchedo ha n'ụzọ ziri ezi, ọ bụghị naanị megide ìhè anyanwụ kamakwa n'èzí n'ozuzu.
Ndụmọdụ maka ịhọrọ golfles snow kachasị mma:
Họrọ enyo anya nke na-eme ka ihu gị daa nke ọma. Ha ga-enwerịrị mpempe akwụkwọ na-egbochi ịmịpụsị iji dozie ha nke ọma na ihu gị na okpu agha gị. Na mgbakwunye, ọ dị mkpa na ha dabara ihu gị nke ọma, gụnyere akụkụ mpụta, ka ha wee kpuchie ọhụụ gị.
Light enyo ugogbe anya. Lee ihe ihe ugogbe anya-igwe. Họrọ dịka polyurethane thermoplastic, nke kachasị adabara, ha ga - enyere gị aka ibute ogo na ịdị ncha.
Na “Anti-foogu” usoro ma ọ bụ Antifog. Y’oburu na gi ugogbe anya-igwe Ha nwere usoro a ga - enyere gị aka izere ịchapu mmiri ma ị na - amịkọrọ na snoo.
Igwe ugo eji eme ikuku na sistemụ ikuku dị n’ime. Ihe kachasị mma bụ na ha nwere teknụzụ mgbochi afọ. Nke a na-eme ka ikuku nwee ike ịgagharị maka ọhụhụ ka mma.
Ugbu a n'ezie ị na-enwekwu ahụ iru ala na njikere ịnụ ụtọ njem nke snowboard n'oge a. N'iburu usoro 3 a n'uche, ị nwere ike ịhọrọ nke golfles ka adabara adrenaline nke egwuregwu. Enweghi ike ịhọrọ nke kacha mma ma gbanwee ọhụụ gị mgbe ị na-eme ihe ndị ahụ snowboard! Soro usoro ndị a wee bụrụ ọkachamara na ugogbe anya-igwe.
Maraworị ihe ndị mere ị ga-eji na-eyi ugegbe ma ọ bụ nkpuchi gị mgbe ọ bụla ị na-aga ebe snow na-ada? Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ oge iji mee ka enyo ihu igwe gị nke 2020 wee dozie maka oge a nke es